I-China eyona nto inyanzelekileyo yeHydrophobic Perlite esetyenzisiweyo ekwenziweni kwangaphandle nakwifektri | Xinzheng
Eyona nto ilungileyo yokucoceka kweHydrophobic Perlite esetyenzisiweyo kulungiso lwangaphandle
I-perlite ye-Hydrophobic iguqulwa nge-hydrophobically ngesiseko sokwandiswa kwe-perlite ukufezekisa isiphumo esihle sokungena manzi. Ukuqhutywa kwayo kwe-thermal kusezantsi, ngokubanzi kujikeleze i-0.045W / mk, kwaye eyona iphantsi yi-0.041W / mk Umphezulu ongaphandle uneglasi yeglass etywiniweyo, ukuze iHydrophobic perlite inamandla amakhulu okucinezela kwaye akukho lula ukutshatyalaliswa, nto leyo inokunciphisa kakhulu izinga lomonakalo ngexesha lokusetyenziswa kwaye ligcinwe ngokufanelekileyo isiphumo sokwambathisa esisebenzayo. Kwangelo xesha, ukuncitshiswa kwamanzi kwento kuncitshisiwe, kwaye isixa samanzi esongezwe kwinxalenye sincitshisiwe, ukuze ixesha lokumisa elipheleleyo lezinto lifutshane kakhulu, elinceda ukuphucula ukusebenza kolwakhiwo.
Ukwaziswa kwe-Hydrophobic perlite
Iimpawu kunye nokusetyenziswa kwe-Hydrophobic perlite
I-1.Hydrophobic perlite sisuntswana elingenamngxuma elinobunzima obunobunzima be-0.15-5mm, obunobuninzi obuphantsi, phakathi kwe-0.05-0.20g / cm3, kwaye lukhetho lokuqala lokugcwalisa izinto. Xa kuthelekiswa nezinye izinto zokugcwalisa izimbiwa, isixa sincinci, ubunzima bokulayisha buncinci, kwaye isixa sepolymer sigciniwe, ke iindleko zemveliso zinokuncitshiswa.
Ukufakelwa kombane kwe-2. Njengezinto zokuzalisa, inokusetyenziswa kwizinto ezahlukeneyo zombane kunye nezinto zokwambathisa. Inokuzinza okuhle kwemichiza, ukugxothwa kwamanzi okunamandla kunye nokusetyenziswa okukhuselekileyo. Inokuhlengahlengisa kwaye ivuselele uxinano lwe-latex kunye ne-gel iziqhushumbisi zamanzi. Yisilawuli soxinano esifanelekileyo sokuvelisa i-latex kunye ne-gel iziqhushumbisi zamanzi.
Ukufakwa kwe-3.Sound, i-Hydrophobic perlite inokuthintela kwaye ifumane isandi, kwaye inokusetyenziselwa izinto zokwambathisa izandi, ukufakwa kwesandi kunye nokufakwa kwezandi kwizakhiwo.
4.Acid kunye nealkali ukumelana, ezona zinto ziphambili ze-Hydrophobic perlite zii-SiO2 kunye ne-Al2O3, ezikufutshane nokungathathi hlangothi, kwaye zizinzile kwizinyibilikisi ezahlukeneyo, iiasidi, ialkali, kunye neetyiwa. Isetyenziselwa ukuhambisa kunye nokugcina i-LNG elwandle, emadlelweni olwandle kunye nezinto ezomeleleyo zokuqina elwandle.
5.Ukuqhuba kwe-thermal conductivity, kunye nokuqhutywa kwe-thermal (0.036-0.054w / mk). I-perlite ye-Hydrophobic ingasetyenziselwa izinto zokuthambisa ubushushu kunye nezinto zokufudumeza ubushushu.
Uzinzo 6.Good thermal. Ukuzinza kwe-thermal kudlula i-1000 degrees Celsius, kwaye kufanelekile ngokukodwa kwizinto ezingatshiyo, ezinqabileyo zomlilo kunye nezixhobo ezikhawulezayo.
Ayiboli kwiqondo lobushushu eliphezulu kwaye akukho lula ukuyilungisa. Njengoko lokufaka Polymer, oko ukuphucula iipropati idangatye nekudodobalisa iipholima kwaye isetyenziselwa izinto zokwakha kunye nokwaleka mveliso mveliso.
7.Low izinga lokufunxa amanzi: Inqanaba lokufunxwa kwamanzi kwi-Hydrophobic perlite ingaphantsi kwe-10%, esetyenziselwa ukuzalisa kunye nokunciphisa imilinganiselo yamachibi amadama.
Egqithileyo bathenge iHorticultural Perlite isambuku sabalimi bezorhwebo
Okulandelayo: I-perlite ore yoshishino yabenzi beziseko
Indalo yeZeolite enobume bendalo ...
Elona xabiso liphezulu lokucoca ulwelo kuncedo lwabacoci ...